Ndilahlekelwe yintlanzi ... | Ngeentlanzi
Ndilahlekelwe yintlanzi ...
Mhlawumbi akukaze kwenzeke kuwe, okanye mhlawumbi kuye kwakho, kwaye uye wazibuza ukuba kwenzeka ntoni kule ntlanzi mhlawumbi oyithandayo okanye enye oyibhalise ngenxa yomzimba wayo, kodwa, ngobusuku iye yanyamalala. Kwenzeka ntoni kuye?
Kukho amaxesha, kuba iintlanzi zinjalo, bazifihla "kwizinto zokudlala" abanazo kwi-aquarium okanye kwizityalo, kodwa xa uchitha ixesha uyikhangela, nokuba ususa ezo zinto kwi-aquarium kwaye awukwazi uyifumane, uqala ukukhathazeka.
Ithiyori ezahlukeneyo zinokunikwa kwezi ntlobo zeemeko. Eyokuqala yile Iintlanzi ziye zahlaselwa zaza zatyiwa ngabanye. Kungenzeka, kuqhelekile kwaye ngamanye amaxesha kungenxa yokuba awufaki ukutya okuninzi kakhulu, ebusuku, bathanda ukuhlaselana ukuze batye kwezona zibuthathaka.
Enye into enokwenzeka, esingasoloko siyiqonda, kukuba intlanzi ingene apho kukho isifudumezi nempompo. Kwenzekile kum, enyanisweni kuyenzeka kum ngoku, ngentlanzi ekhulele apho kwaye ngalo lonke ixesha ndiyikhupha ihamba yodwa (andazi njani) kwaye inyamalale kwiintsuku ezimbini kamva.
Kunzima kakhulu ukususa ukuba awukhupheli i-aquarium kwaye iintlanzi ezininzi zikhetha oku ukuze zizole ngakumbi (azihlali). Nangona kunjalo, kunokubakho ingxaki ukuba une-aquarium enegumbi lokumpompa kunye nesifudumezi kwaye, phakathi kwelo gumbi kunye ne-aquarium, kukho indawo encinci. Ngoba? Kungenxa yokuba apho unokubeka neentlanzi.
Njengomthetho iintlanzi zazingazukungena (nditsho njengomthetho kuba intlanzi yam ilapho). Ukubakhupha kunzima, akunakwenzeka, kodwa xa ubona ukuba wenza okufanayo xa uzama ukumenza abe nabanye, iyanzima izinto.
Ukuyishiya ngaphakathi kwigumbi okanye phakathi kwayo kunye ne-aquarium kubangela ukuba ibe yinto engathandekiyo kwaye ingakhuli njengoko kufanelekile, kodwa ukuhlala nezinye iintlanzi kuyenza ibe noloyiko kwaye inokuba sesona sizathu sokuba ilahleke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ndilahlekelwe yintlanzi ...